Fampandrosoana · Jolay, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Fampandrosoana · Jolay, 2010
Tantara mikasika ny Fampandrosoana tamin'ny Jolay, 2010
Bangladesh 31 Jolay 2010
Taiwan: Tanimbary goavana teo ivelan'ny trano fiasàn'ny Filoha
Azia Atsinanana 25 Jolay 2010
Ny faha 18 Jolay, ho fanoherana ny Lalàna famerenana ny tany amin'ny fanjakana dia navadik'ireo tantsaha Taiwanese ho toy ny tanimbary midadasika ny lalambe migodana manoloana ny trano fiasàn'ny Filoha, fa tsy hoe hanao zaridainan'ny tanàna.
Filipina 24 Jolay 2010
Jordania: Naningotra ny fotoana nampanonofy antsika ve ny teknolojia?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Jolay 2010
Mitàna andraikitra lehibe eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny solosaina sy ny teknolojia. Mahatsiarotsiaro ny raomantisma eo am-pandraisana taratasy amin'ny alalan'ny mailaka ny mpitoraka blaogy iray avy any Jordana ary hoy izy ao anaty blaoginy: "Mankahala ny elektraonika aho."
Sina: Fijerim-bahiny ny Rantin'i Shanghai
Azia Atsinanana 20 Jolay 2010
Nandia ny roa volana sahady amin'ny enim-bolana holalovany ny Ranty Manerantanin'i Shanghai . Tsy nipetrapetra-poana ny mpitoraka bilaogy mba hamantatra ny tanjon'ity fandaniam-bola goavana ity, sy hitantara ny fivoarana haingana dia haingana hita amin'ny moron-dalana izay vitsy dia vitsy no tsy tratran'ny fanomanana ity fotoan-dehibe ity. Ny fampirantiana , izay...
Nizera 14 Jolay 2010
Indonezia: Rehefa ny vehivavy no mifehy ny fampiasam-bolany
Azia Atsinanana 14 Jolay 2010
Resaka nandeha avy hatrany mikasika ny fitantanana orinasa sahanin'ny vehivavy, ny fahazotoana sy ny fampiasam-bola miaraka amin'ireo mpiara-miasa ao amin'ny serasera anaty aterineto Resadresaka Hanatsarana ny Tany, mizara ohatra avy any Indonezia i Carolina.
Afrika Mainty 03 Jolay 2010
Nankalaza ny faha – 50 taonan’ny fahaleovantenany niala tamin’ny zioga Belza ny Repoblika Demokratikan’i Congo. Raha mbola faly mampidera ny halafon’ny fitaovana ara-miaramila vaovao izay ampiasaina amin’ny fisehosehoana amin’ireo manamboninahitra ny fanjakana , dia mitantara ireo filatroana tany Kinshasa sy Lubumbashi kosa ny mpitoraka blaogy Kakaluigi[fr] sy Congo Miliki [fr], eo andanin’izany, mampahatsiahy ny vanim-potoan’ny fahaleovantena sy ny zava-bita tsara indrindra tamin’ireo androm-panantenana ny mpitoraka blaogy Kongole sasany.